Ọnụ ego nke ịtụ nhapụta na igbe mbata | Martech Zone
Ọnụ nke ịtụ nhapụta mgbapụta na ọnụego igbe mbata
Tuesday, February 2, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Ọ bụrụ na Ndị Nzipu Ozi nwere ebe a na-ekpofu ahịhịa n’ebe ha nọ, mgbe ọ bụla ha hụrụ mpempe akwụkwọ na-abịa ebe ahụ, ha tụbara ha niile n’ime mkpofu ahịhịa, ị ga-akpọ nke ahụ nyefere? Ọ bụghị n'ezie! N'ụzọ dị ịtụnanya, agbanyeghị, na ụlọ ọrụ na-ere ahịa email email ọ bụla enyere na folda spam ahụ dị ka Nyefere!
N'ihi ya, ndị na-enye email na-ekwu banyere ha nnapụta akara dị ka a ga - asị na ha bụ ihe ga - etu ọnụ. Ma, ọ dị mwute na ndị ahịa ha, aha onye ziri ozi ahụ, tinyere ogo adreesị nnata na ngalaba ọ bụla, yana ọdịnaya email nwere ike mepụta egwu ntinye igbe maka ndị ahịa. Nke a abụghị ihe ha na-akọ, ọ bụ ezie.
Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji arụ ọrụ nke nyiwe dị ka 250ok. 250ok na-enye ndị na-ezigara ya na ndepụta mkpụrụ nke a na-enyocha iji hụ ma mkpọsa ahụ ọ na-abanye na igbe mbata ma ọ bụ na nchekwa spam. Nke a na-enye ndị na-ere ahịa akụkọ niile dị mkpa ha chọrọ iji dozie ma dozie nsogbu mgbapụta - ma ọ bụ ogo ndepụta, ogo ọdịnaya, ma ọ bụ nsogbu akụrụngwa.
250ok bụ ndị na-akwado Martech ma anyị na-eji usoro ha iji nyochaa ma melite igbe mbata nke anyị. 250ok nwere mmasị ịkpọ nke a ezi nnyefe ziri ezi. Ileba anya ebe a nwere ike ịpụta puku kwuru puku dollar na-emepe emepe, pịa ma gbanwee ọnụego ndị na-ere ahịa email.
Tags: 250okakụkọ ifo ịnapụtaọnụego mgbapụtaemail pịa uduemail deliverability n'elu ikpo okwuemail ọnụego igbeemail emeghe ọnụegoemail n'elu ikpo okwuemail mkpụrụ ndepụtandị na-ezigara emailigbe mbataigbe ọnụegondepụta mkpụrụezi nnyefe ziri ezi
Uzo asaa iji bulie oru ntughari ahia gi
Etu esi agbagha ọnụego nnabata Email